787-800 Mega rongedza dambudziko.
mubvunzo 787-800 Mega rongedza dambudziko.
1 gore 8 ago #632 by ricsmi
Hello zvose, ndava chete yapfuura ndakatanga kuridza FSX SE uye chaizvoizvo kunakidzwa nayo.
Handina chete yakatoiswa TDS 787-800 Mega rongedza uye chete dambudziko ndine nayo kuti hapana nzvimbo yemutekenyi bhatani uye zvokuchunisa kushanda VC, I vanobhururuka ndege kwangu kose VC uye izvi kuuraya ndege iyi sezvo ini haigoni vamire 2d nzvimbo yemutekenyi.
Chero pfungwa vakomana?
1 gore 8 ago #633 by Gh0stRider203
zvakanaka sezvo iri 2 injini shiri, I chaizvoizvo tinoziva VC unogona kushandisa. uchaita unofanira kudhanilodha mamwe ndege, asi zvinenge zvakakodzera
ichi ridza sei kuti swap kunze VC
ari VC uyu ndiye nani akanaka. Handirevi chaizvoizvo kushandisa nayo asi dzichipfekeka
Zvinotevera mushandisi (s) akati Thank You: ricsmi
1 gore 8 ago #634 by ricsmi
Ok ngaavongwe Ndichatora vatarire, akawana mumwe dambudziko, i chete akaona kuti pamusoro panze maonero kunounza Hwokutengesa rori dzakabatana ndege.
Ndinoita sei kubvisa kuti sezvo anotarisa yakapusa uye akarurama clips nenzira iri default rimwe.
1 gore 8 ago #635 by Gh0stRider203
kutanga VC, NOW stowaways? sokunge usingagoni kubata kuregawo! LOL
kuti handisi chokwadi pamusoro, nokutendeseka. Handina kubhururuka kubva 787 (the 772LR ane kugona uye siyana nani). CHETE chinhu Ndinogona pfungwa iri kutarisa pasi ukomba kuona kana pane hwindo utility. Ndinoziva vamwe Project Open Sky shiri dzine kuti.
1 gore 8 ago #640 by ricsmi
Averenga kuburikidza verenga ini rinoti pane Magetsi Panel kuti anogona kudzima Tug, pemapuranga zvinofanirwa kuratidza pashure kudzvanya Ctrl + 7 asi kuti isnt kushanda kana.
Chero pfungwa gents?
Time chokusika peji: 0.211 mumasekonzi